Muqdisho,4ta April 2006
Dagaal ku dhexmaray shalay galab ciidanka dawladda goboleedka Puntland iyo maleeshiyo beeleed ka soo jeeda tuulada lagu magacaabo Majiyahan oo qiyaastii u jirta 40 KM magaalada Boosaaso, ayaa la soo wariyay inuu khasaaro lixaad leh ka soo gaaray ciidanka Puntland .
Saddex askari ayaa lagaga dilay ciidanka Puntland, halka dhaawaca soo gaaray-na uu yahay sideed nin .Dhinaca maleeshiyada beesha Majiyahan waxaa ka dagaalka kaga dhintay nin, nin kalena wuu kaga dhaawacmay.
Iyadoo ay tahay markii labaad ay labada dhinac isaga horyimaadaan halkaas, ayaa la soo sheegay in muranka uu yahay mid salka ku hayo macdan la sheegay in laga baarayo halkaas, oo odayasha beesha Majiyahan ay ku doodayaan inay xaq u leeyihiin in marka hore si gaar ah loogu tixgeliyo, inta aan beeshooda laga bilaaban qodidda macdantaa.
Dhanka kalena, waxaa na soo gaaray inuu ka curtay gobolada waqooyi Galbeedka Soomaaliya roobabkii gu'ga. Wax khasaare ah oo uu soo gaaray degmooyinka Somaliland ee roobabka ka curteen ma jirto.